ब्रेकिंग न्यूज Archives - NepalPana
रेशम चौधरीका पक्षमा कतारबाट आयो यस्तो चेतावनी (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारले कैलाली १ बाट निर्वाचित टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीलाई विजयी प्रमाणपत्र दिन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष देवराज राई र महासचिव शिवकुमार भुजेलले आइतबार कतारस्थित दोहाबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चौधरीलाई तत्काल विजयी प्रमाणपत्र […]
राज्यबाट ठगिएका पूर्वएसएसपी खनालमाथि पर्यो ठूलो बज्रपात
काठमाडौं । राज्यबाट ठगिएका नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी यादवराज खनालमाथि ठूलो बज्रपात परेको छ । उनी पत्नी शोकमा परेका हुन् । उनकी धर्मपत्नी कामना खनाल भट्टको ५१ वर्षको उमेरमा बिहीबार निधन भएको छ । लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित कामनाले अकालमै मृत्युवरण गरेकी हुन् । अहिले […]
चुनावी परिणाम आएलगत्तै वाम गठबन्धनको थाल्यो यस्तो तयारी, ओली–प्रचण्ड तयार
काठमाडौं । दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएलगत्तै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेको छ । एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार निर्वाचन परिणाम, नयाँ सरकार गठन, भावी रणनीतिका विषयमा जानकारी दिन वाम गठबन्धनले […]
प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गरे भारतको प्रस्ताव, ओलीभन्दा बलियो देखियो प्रचण्डको राष्टवाद
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । काँग्रेस, मधेस केन्द्रित दल र राप्रपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न भारतले गरेको प्रस्ताव प्रचण्डले अस्वीकार गरेको माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताले बताए । उनले यो प्रस्तावलाई एमाले र माओवादी बीचको […]
समानुपातिक मतगणना सकियो, कुन प्रदेशमा कसका कति सांसद ? काँग्रेसले गर्यो यस्तो चमत्कार
काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना करिब–करिब सकिएको छ । शनिबार रातिसम्ममा ९५ लाख ३ हजार ६ सय १८ मत गणना भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सर्लाही २ र ३ नम्बर क्षेत्रको गणना जारी छ । दलहरूले प्राप्त गरेको मतअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको कुल १ […]
अन्ततः पूर्व प्रधानसेनापति कटवालकै शरणमा पुगे प्रचण्ड !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पुर्व प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाल अब छिमेकी भएका छन् । केही वर्षदेखि बस्दै आएको लाजीम्पाटस्थित निवास छाडेर प्रचण्डको परिवार खुमलटार सरेको छ । पुर्व प्रधानसेनापति कटवाल पनि खुमलटारकै बासीन्दा हुन । ललितपुरको सात दोबाटो चोकबाट […]
भारतसँग एमाले मिलेपछि वाम गठबन्धनभित्र मारामार सुरु, कांग्रेसको साथ खोज्दै देउवाको शरणमा पुगे प्रचण्ड !
काठमाडौं । एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले केपी ओली नै पार्टी अध्यक्ष, संसदीयको नेता र प्रधानमन्त्री हुने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि बाम गठबन्धनभित्र ‘तरंग’ पैदा भएको छ । एमालेभित्र गुटको राजनीति चलाउँदै आएका महासचिव पोख्रेलले एकाएक किन एकीकरण विरुद्ध अभिव्यक्ति दिए भनेर सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ […]
ओली निवास बालकोट किन पुगे महानायक हमाल ?
भक्तपुर । वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएकोमा महानायक राजेश हमालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बधाइ दिनुभएको छ । शनिबार ओली निवास बालकोट पुगेर हमालले आगामी सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई स्थिरता, शान्ति र विकासको महायात्रामा अगाडि बढाउन ओलीलाई शुभकामना दिनुभएको हो । ‘तपाईको राष्ट्रियताको […]
समानुपातिकतर्फ कुन दललाई कति सीट ? यस्तो छ अन्तिम नतिजा (सूचीसहित)
काठमाडौं । समानुतिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । जसमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल भएका छन् । चौथोमा संघीय समाजवादी फोरम र पाँचौंमा राजपा नेपाल रहेको छ । हेर्नुस् कुन दलले कति सीट जित्यो ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सूचीः समानुपातिक मतका […]
एमाले सचिव भीम आचार्यले यसरी पार्टीको धज्जी उडाए, केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरु तनावमा
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको नतिजा आइसक्दा अव प्रदेशको मुख्य मन्त्री को वन्ने ?भन्ने वारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको बेला नेकपा एमालेका सचिव भिम आचार्यले भने आफु र आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेको धज्जी उडाएर काग्रेसलाई फाइदाको बाटो बनाइदिने गरेका छन् । देशमा बाम […]